12 Qolalka Baxsashada Ugu Fiican Dunida | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 12 Qolalka Baxsashada Ugu Fiican Dunida
12 Qolalka Baxsashada Ugu Fiican Dunida
by Paulina Zhukov
Tareenka Safarka ee Britain, Tareen safarka Shiinaha, Tareen Travel Czech Republic, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen safarka Giriigga, Tareen Travel Holland, Tareenka Safarka ee Hungary, Tareen Safar Talyaani, Tareen Travel The Netherlands, Tareenka Safarka Boqortooyada Ingiriiska, safarka Europe
Waqtiga Akhriska: 8 daqiiqo
(Last Updated On: 05/11/2021)
Xiiso leh, cabsi leh, is dhexgal ah, adduunyada dhulka hoostiisa, ama guryo qadiimi ah, ah 12 qolalka baxsadka ugu fiican adduunka, uma aha kuwa qalbi jilicsan. Taas lidkeeda, kaliya geesi, Ciyaartoyda kooxda ee xirfadda leh iyo kuwa jecel xujooyinka ayaa ku guuleysan doona badbaadinta adduunka, iyo furitaanka sirta mudada dheer la ilaaway. Haddii aad u maleynaysid inaad heysato waxa ay qaadaneyso, ka dibna mid ka mid ah buugan 12 qolalka baxsadka ugu fiican adduunka, oo isku day inaad garaacdo fursadaha.
Rail Transport Ma The Eco-Friendly Jidka Si Safarka. Maqaalkani waxa uu ugu qoran tahay in wax lagu baro oo ku saabsan tareenka Travel by Save A tareenka, The Bogagga Tikidhada Tareenka ee ugu jaban Adduunyada.
1. Qolka Baxsiga Sherlocked Amsterdam
Waxaa loogu magac daray baaraha ugu caansan dunida, Qolka baxsashada Sherlocked waa mid ka mid ah qolalka baxsadka ugu xiisaha badan adduunka. Gudaha Sherlocked waxaad kala dooran kartaa 2 waayo -aragnimo aad u kala duwan; Architect ama Vault -ka. Mid waa 60 daqiiqado dheer, tan labaadna waa 80 daqiiqado dheer, labaduba waxay ku habboon yihiin koox 4 dadka, waalidiinta iyo kurayda ayaa aad loo soo dhaweeyaa.
Si kastaba ha ahaatee, farqiga ugu weyn ee u dhexeeya labada qol ee baxsadku waa waxqabad dabcan. Architect -ku wuxuu kugu xallin doonaa waxyaalaha qarsoon qol cusub si aad u ilaaliso sirta ugu qarsoon adduunka. Dhanka kale, Vault -ku wuxuu kaa yeeli doonaa inaad dadka u beddesho tuug si aad shay qaali ah uga xado meel ammaan ah oo aad loo ilaaliyo. Kuwo badan oo hore ayaad isku dayday oo aad fashilantay, laakiin budhcaddaadu waxay noqon kartaa mid ku guulaysan karta hawlgalkan qarsoodiga ah ee dhagaraysan. Sidaas, qolka baxsadkan ayaa ku biiraya waxyaabaha ugu gaarka ah ee lagu sameeyo Amsterdam.
Brussels ilaa Amsterdam Tareen
London ilaa Amsterdam Tareen
Berlin ilaa Amsterdam Tareen
Paris ilaa Amsterdam Tareen
2. Baxsashada Ugaadhsiga Adduunka
Qolka baxsashada ugaadhsigu wuxuu laamo ku leeyahay meelo badan oo adduunka ah, England ilaa Singapore. Haddii aad jeceshahay xayawaan aan caadi ahayn, Sheekooyinka Disney, iyo Alice, markaa waad jeclaan doontaa qolkan baxsashada oo waxaad u safri doontaa ujeeddada kaliya ee Baxsiga Hunt, dal kasta.
Qolka baxsashada ee Hunt wuxuu leeyahay liiska qolalka baxsadka, kala duwan waddan kasta. Marseilles, waxaad raadin doontaa saaxiibo ka dib markii Houdini uu ka dhigay inay ku baaba'aan goobtii weynayd, ama gudaha UK ka caawi Alice iyo saaxiibbadu inay badbaadiyaan Wonderland. Sidaas, xujooyinka iyo waxyaalaha qarsoon ee adduunku waxay u baahan yihiin kaalmadaada iyo ka -faa'iideysigaaga magaalooyinka waaweyn ee Yurub iyo Aasiya.
3. Enigma Quest ee London
Waxay ku taal Finsbury, wax yar u jirta London Bridge iyo Wabiga Thames, Enigma Quest wuxuu bixiyaa baxsado 3 weydiimo yaab leh. Haddii aad la safraysid saaxiibbo, qoyska leh carruur, ama lamaane raadinaya tacabur, markaa waxaad dooran kartaa inta u dhexeysa qolka baxsadka biyaha badda hoosteeda iyo malaayiin rodol.
Haddii aad tahay adrenaline -doon, laga yaabee Thelma iyo Louise ee xiga? markaas halxiraalaha Enigma Quest ayaa adiga kugu habboon. Hawlgalka Wavebreak waxaad badbaadin doontaa adduunka, iyo Milion Pound Heist, waxaad u baahan doontaa inaad ku midowdo abaalmarinta ugu weyn taariikhda casriga ah. Sidaas, haddii aad u malaynayso inaad haysato waxay qaadanayso, ka dibna Enigma Quest qolka baxsashada ee ku yaal bartamaha London ayaa kuu qorsheeyay halyeey 60-daqiiqo oo xiiso leh.
4. Mashruuca Khilaafsan 2: Qolka Dukaanka Buugaagta ee Athens
Haddii aad tahay qof xagjir ah oo qolka baxsadka ah, ka dibna Mashruuca Khilaafsan 2 Athens waa waayo -aragnimada qolka baxsashada ugu dambaysa. Si ka duwan qolalka kale ee baxsadka ee cajiibka ah ee adduunka, Hawlgalka Mashruuca Isbarbaryaaca ah wuxuu deggan yahay dhammaan guriga neoclassical ee Athens. Waa sax, baadi -goobkaagu wuxuu ku faafaa qolalka badan iyo marinnada qarsoodiga ah ee gurigan aadka u fiican.
Waxaa intaa dheer, qolka baxsashada ee Dukaanka waa a 200 hawlgalka daqiiqado, taas oo si fudud loogu qaybin karo 5-6 qolalka baxsadka ee mowduuca leh. Sidaas, dhab ahaantii waxaad ku raaxaysan doontaa adduunka ugu fiican, taasina waa khibrad qolka baxsadka oo aan qiimo lahayn. Qalab si qurux badan loo naqshadeeyay oo leh xujooyin, meelo badan, jaranjarada, waxay sugaysaa xiise-doonka gudaha maktabadda dhabta ah ee Athens.
Amsterdam Ilaa London Tareen
Paris ilaa London Tareen
Berlin ilaa London Tareen
Brussels ilaa London Tareen
5. Mudane. X Mystery House Shanghai
Hadii aad ka daasho dhismooyinka dhaadheer ee Shanghai, Mudane. Guriga halxiraalaha ee X wuxuu noqon doonaa nasasho weyn oo ka timaada magaalada buuqa badan. Gurigan la yaabka leh ee la yaabka leh ayaa leh 5 qolal, mid kastaa wuxuu leeyahay sir qarsoon oo uu ku xaliyo. Asal ahaan qol ayaad ku xiran tahay saacad, iyada oo aan wax fikrad ah ka haysan sawirka weyn. Caqabaddu waa adeegsiga wax kasta oo qolka ku jira, iyo xataa waddada, si aad isugu daydo oo aad u hesho sidaad qolka uga bixi lahayd.
Mudane. Qolalka baxsadka ee X waxaa ka buuxa waxyaalo qarsoon iyo caqabado. Ka soo horjeeda qolalka kale ee fakashada cajiibka ah ee adduunka, halkan kooxdaadu waxay u baahan doontaa inay adeegsato dhammaan dareennada, fiirsasho, iyo macquul, si aad si fudud u hesho waddo ka baxsan qolka. Mudane. X Mystery House wuxuu ku yaal bartamaha Bridge 8 II, Degmada Huangpu, halkaas oo hiwaayaddu si toos ah uga bilaabmato albaabka.
6. Doonyaha Baxsashada Iyo Qolalka SOS ee Qolalka Dublin
Qolka Doonyaha Baxsiga ee aan caadiga ahayn ee magaalada Dublin waa midka ugu sarreeya 10 qolalka baxsadka adduunka. halkan, waxaad u baahan doontaa inaad isku xirto dhammaan caqligaaga iyo tamartaada oo aad hesho waddo aad uga baxdo doonnida. Dhab ahaantii, Baxsashada Doonyaha iyo qolalka SOS waxay ku yaalliin doon, ka baxsan dekedda Dublin.
Sidaa darteed, Qolka baxsadka Doonyaha iyo SOS waa qaar ka mid ah qolalka baxsadka gaarka ah ee adduunka. Jidka laga baxo waxaa ka buuxa xujooyin, code-dillaac, iyo xalinta qarsoodiga. Haddii qolka baxsadka uu ka mid yahay dabbaaldeg gaar ah, shirkadu waxay xitaa diyaarin kartaa cuntada farta laga bilaabo baararka dhow on Dock kanaalka.
7. Qolka Baxsiga ee ParaPark Budapest
Qarsoodiga ugu weyn ee Budapest ayaa kugu sugaya qeybta hoose ee qolka baxsiga ee ParaPark. Waxaad hoos u degi doontaa si aad u hesho tilmaamo daadsan qolka ugu horreeya ee baxsashada ee Yurub. halkan, waxaad isku arki doontaa goob dembi, Twin Peaks waxyoonay. Sidaas, u diyaargarow inaad ciyaarto baare, oo kooxdaada ka caawi sanduuqa, sidaad u malaynayso sanduuqa, ama dhulka hoostiisa, waayo, xaalkan in.
Muuqaalka Dambiyada 95 wuxuu ku yaal NYC, halkaas oo kooxo burcad ah ku dagaallamaan waddooyinka, oo masiibo ayaa dhacda. Sidaas, waxaa laguugu yeeri doonaa si aad u hesho xallinta tilmaamaha, keydi waraaqaha si aad u hesho dembiilaha ka hor dhammaadka saacad. Si aad u soo gabagabeyn, qolka baxsashada ee ParaPark waxaa loogu talagalay dadka xiisaha badan ee qalbiga jecel iyo sheekooyinka dambiga.
Vienna ilaa Budapest Tareen Tareen ah
Prague ilaa Budapest Tareen Tareen ah
Munich ilaa Budapest Tareen
Graz ilaa Budapest Tareen Tareen ah
8. Qolka Berlin
Qolka ayaa leh 4 hawlgallada, mid walba 75 daqiiqado dheer, mid kasta oo adag, mid walbana wuxuu kaa rabaa inaad u safarto waqti kale meel kale. Ugaarsiga khasnadda ee Jaamacadda Humboldt, shaqo barasho oo leh ugaadhsadaha rooxaanta ugu weyn, ama ka caawinaya baaraha weyn ee Berlin inuu soo qabto Dilaaga Berlin, way cadahay in ergooyinkaan aysan u ahayn gamer si fudud u baqaya.
Sidaa darteed, si taxaddar leh u dooro loolankaaga, oo la imow si fiican oo qalabaysan, labbis, iyo qalbi geesinimo leh. Baxsashada Qolka ee Berlin waa a 2017 Guuleystaha Dahabka ah, loogu talagalay inay ka hortagaan xamaasad kasta oo qolka baxsadka ah. Waxaa intaa dheer, qolka baxsadkan ayaa gebi ahaanba u qalma safar lagu tago Berlin, mar labaad iyo shanaad.
Frankfurt ilaa Baarliin Tareen
Leipzig ilaa Berlin Tareen
Hanover ilaa Berlin Tareen
Hamburg ilaa Baarliin Tareen
9. The Catacombs Escape Room Paris
Qolkan aan caadiga ahayn ee baxsadka ee Paris waxaa loogu talagalay dadka xiiseeya geesinimada leh. Haddii aadan garanayn magaca, qolka baxsadka ee Catacombs wuxuu qarniyo kugu celinayaa meel mugdi ah oo ku taal dunida dhulka hoostiisa ee Paris. Halka Paris ay tahay midda ugu badan magaalo qurux badan dunida oo dhan, catacombs waa spooky, qaarna waxay dhihi doonaan xoogaa cabsi ah.
Sayidka, haddii aad tahay qof halis u ah wadnaha, iyo goosebumps ma aha dareen la yaab leh, markaa ballanso qolka baxsashada Catacombs. Ku ciyaarida ciyaarta qolka baxsashada halkan waxay noqon doontaa waayo -aragnimo xiiso leh iyo isbeddel cusub oo ka yimaada booqashada jardiinooyinka, ama dukaameysiga Paris.
Amsterdam ilaa Paris Tareenka
London ilaa Paris Tareen
Rotterdam ilaa Paris Tareen
Brussels ilaa Paris Tareenka
10. Harry Potter Escape Room Prague
Baxsashada qolka Harry Potter waa hawlgal qoys. Qurxinta iyo xujooyinka ayaa u fiican carruurta, leh tirooyin is -dhexgal ah oo carruurtu la xiriiri karto. Intaa waxaa dheer, adiga iyo carruurtuba waxaad heli doontaan usha sixirka, si ay u la kulmaan dunida gaarka ah ee Harry Potter.
Qolka baxsashada Harry Potter ee Prague waa a 60 hawlgalka daqiiqado. Inta lagu jiro saacaddan sixirka ah, kooxdaadu waxay u baahan doontaa inay hesho saddex farshaxan oo ku qarsoon sirta Harry Potter qolka baxsadka, Qolka Baxsashada Harry Potter waa waqti xiiso iyo xamaasad leh dhammaan qoyska Prague.
Nuremberg ilaa Prague Tareen tareen ah
Munich si ay u Prague Iyadoo Tareen
Berlin si ay u Prague Iyadoo Tareen
Vienna oo ku socota Prague Tareen tareen ah
11. Ciyaarta Bannaanka ee Bannaanka ee Villa Borghese Rome
Qof walba wuxuu u safraa Talyaaniga cunto, villooyinka, iyo khamri degaanka. Iyada oo ay ku habsatay qolalka baxsadka ee adduunka qabsaday, Goobaha ugu sarreeya Talyaaniga waxay noqdeen qolalka baxsadka ugu yaabka badan. Villa Borghese oo la yaab leh ayaa ah meesha laga bilaabayo a 2.5 saacadaha xallinta xujooyinka. Villagu waa qol ka baxsan bannaanka halkaas oo aad uga sii gudbi doontid tilmaanta doonyaha.
Qolkan baxsadka ee gaarka ah wuxuu ku yaal Rome. Sidaas, markaad dhameyso sahaminta Colosseum, waxaad ka heli doontaa meelo qurux badan oo qarsoon caasimadda Talyaaniga. Si aad u soo gabagabeyn, Villa Borghese waa qolka bannaanka ee ugu fiican Yurub. Si ka duwan dhulka hoostiisa, maktabadaha, iyo catacombs, halkan waxaad kula falgali doontaa muuqaalka Talyaaniga ugu quruxda badan.
Milan ilaa Rome Tareen
Florence ilaa Rome Tareen
Venice ilaa Rome Tareen
Naples ilaa Rome Tareen
12. Qolka Baxsiga Sheybaarka Bunschoten
Saacad ka socota Amsterdam, qolka baxsashada sheybaarka ee Bunschoten gebi ahaanba waa u qalmaa wadista ama safarka tareenka from any location in Europe. Bunschoten ayaa leh 3 qolalka baxsadka, laakiin Shaybaadhka ayaa ugu fiican, iyo mid ka mid ah qolalka baxsadka ugu fiican Yurub.
Si loo dhamaystiro hawlgalka adag, you will step into Dr. Sheybaarka Steiner, sidii uu uga tagay 7o+ sano ka hor. Ujeeddadaadu waxay noqon doontaa inaad ogaato waxa ku dhacay dhakhtarka saboolka ah, waxaadna u baahan doontaa inaad soo urursato dhammaan xooggaaga iyo wax -qabadkaaga si aad u xalliso qarsoodigan kaliya 60 daqiiqo. Sida iska cad, waad keeni kartaa 2-3 shuraakada howlgalka, markaa xusuusnow inaad horay u sii ballansato.
halkan at Save A tareenka, waxaan ku faraxsanaan doonnaa inaan kaa caawino xallinta qarsoodiga ugu weyn adduunka. Mid kasta oo ka mid ah hawlgallada qolka baxsashada ee cajiibka ah waa safar tareen oo ka durugsan albaabkaaga.
Miyaad rabtaa inaad ku dhejiso dhejiskayaga baloogga “12 Qolka Baxsiga ugu Wanaagsan Dunida” bartaada? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fso%2Fbest-escape-rooms-world%2F - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa jidadkeena tareenka ugu caansan - https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml.
Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml, waxaadna u badali kartaa / es / fr ama / de iyo luqado badan.
Bestescaperoomineurope Bestescaperoomsworldwide EscapeRoom Escaperoomsineurope funtravel popularescaperoomseurope topescaperooms
Waxaan ahay qoraa jecel, socotada dagaal kulul iyo blogger. Waxaan aaminsanahay in luqadda iyo ereyadu yihiin qalab awood leh oo dhiirigelin kara oo abuuraya adduunyo cusub. Waan jeclahay safarka iyo wadaaga socdaalkayga iyada oo loo marayo sheekooyinkayga dumarka kale ee adduunka - Waxaad halkan si aad u riixi kartaa ila soo xiriir
Inta badan cajiib qalcadahaba ee Germany
Safarka tareenka, Tareenka Safarka Jarmalka, Tilmaamaha Tareenka Safarka, safarka Europe
5 Baaskiil Best tamashle Si Socda In Europe
Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Travel Holland, Tareen Safar Talyaani, safarka Europe
top 3 Goobaha Tareen ee ugu Fiican London
10 Joogsiyo Yaab Leh Yurub
10 Dabaqadaha ugu Quruxda badan Adduunka oo dhan
10 Meelaha Ugu Midabada Badan Adduunka
7 Talooyin Si Aad Uga Fogaato Jeebka Yurub